Amanani aphindwe kabini aphumelele iveki yokuqalisa Martech Zone
Amanani aphindwe kabini aphumelele ngeveki yokuqalisa
NgeCawa, ngo-Novemba 14, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Akubangakho bantu baphulukene ne- Impelaveki yokuqalisa apha eIndianapolis. Yayiyingqokelela emangalisayo yeembono ezimnandi- uninzi lwazo lwalusele lusenziwa kunye neeprototypes ezinzulu. Kudos uya ku Lorraine Ibhola ngokwenza into eyodwa ukudibanisa esi siganeko simangalisayo- kunye nePurdue Research Park - indawo engummangaliso yokubamba kuyo. Ophumeleleyo ibinguScats squared, isixhobo sokujonga ifuthe elenziwa yi-Twitter kwindawo yakho ngokudlulisa amakhonkco.
Ingxaki, endikhe ndanayo kubhaliwe malunga, kukuba phantse onke amashishini ayithathe kancinci itrafikhi ebhekiswa kuyo abayifumana kwi-Twitter kuba bajonge nje kwimimandla ekubhekiswa kuyo kuTwitter.com. I-Twitter.com imalunga ne-18% yazo zonke i-Twitter traffic.
Kukho ezinye izisombululo-njengokusebenzisa iikhowudi zephulo xa unciphisa kwaye usasaza ii-URL zakho… kodwa oko kusebenza kuphela kwikhonkco nina usasaze. Esinye isisombululo kukusebenzisa iBit.ly Pro… kwakhona, kukulinganisa amakhonkco kuphela nina usasaze. Ishishini leBit.ly likuvumela ukuba ubeke esweni ikhona Ii-URL zakho zifutshane naphi na kwiBit.ly. Kodwa ayinguye wonke umntu osebenzisa iBit.ly.
Ukuncwina… okulandelayo kukusebenzisa isixhobo esinjengee-Backtweets eziqikelela ukufikelela kwikhonkco ngalinye olibonise phaya, kodwa kungakuniki nkcukacha-manani kwisayithi ukuba zingaphi iindwendwe ezifike kwindawo yakho.
Isisombululo esifanelekileyo, ewe, yayiza kuba yi-Twitter ukuvumela amashishini ukuba ongeze iikhowudi zawo zomkhankaso kwimimandla abanayo. Ngale ndlela, nangaliphi na ixesha ikhonkco elibekwe nguye nakowuphi na umntu okwisizinda sakho, ikhowudi yomkhankaso yongezwa ngokuzenzekelayo kwaye lonke uhlalutyo luya kuba nakho ukubhalisa ulwazi malunga nalapho utyelelo lufike khona. Ngelishwa, i-Twitter iyayenza le nto kunxibelelwano lwayo oluninzi- njengaleyo bayisasaza kwii-imeyile.
Amanani aphindwe kabini ndiyathemba ukunceda ukunciphisa le conundrum… ubuncinci ngokulinganisa ifuthe leetweets zakho kwindawo yakho. Izibalo ezikwere ngokudityaniswa komsinga we-Twitter kunye neBit.ly ukubonelela ngezibalo kwindawo yakho. Nangona kubonakala ngathi kusebenza neBit.ly hayi iBit.ly Pro… okt. Ii-URLs zethu zifinyeziwe njenge mkt.gs kodwa kubonakala ngathi ayibhalisi.
Ndinoluhlu lwezifiso ze Amanani aphindwe kabini:
Ikholamu esekunene emileyo ehlanganisiweyo, ebonelela ngeeTweets eziphezulu kunye namaxabiso okucofa emva koko (i-CTRs) emini, evekini nasenyangeni.
Ukukwazi ukubona indlela yokuhambisa, ukusuka kwi-tweet yoqobo ukuya kubantu abaphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde baphinde bathathe ikhonkco.
Ukukwazi ukubona abantu abasebenzisa i-RT yakho kakhulu kwaye, ukuba kunokwenzeka, ukugcwala kwabo bakuqhubela kuwe.
Kwakunomdla ukubakhona kwiphaneli yejaji yeziqalo ezazisuka kwimbono zisiya kwimpelaveki enye. Amanani aphindwe kabini anendawo yokucoca indlu ekufuneka eyenzile kunye nophuhliso olongezelelweyo, kodwa sisiseko esihle ngaphandle kwebhokisi. Ibekwe kakuhle, inomdla ngokubonakalayo, kwaye sele ibonakala isebenza kakuhle.
Iindlela ezi-5 eziPhezulu zokuba ngengozi u-Spammer